Baarlamaanka Soomaliya oo Ansixiyay Xeer Hoosadka ay ku shaqaynayan+Warbixin | HobyoNet.Com
Baarlamaanka Soomaliya oo Ansixiyay Xeer Hoosadka ay ku shaqaynayan+Warbixin
MUQDISHO/HOBYONET)Mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyey xeer hoosaadka golaha shacabka uu ku shaqeynayo kadib cod maanta loo qaaday xeer hoosaadka.
Dood dheer oo Maanta Baarlamanka somaliya ku yeshen Xarunta Golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho ayay xildhibaanadu ka hadleen 11 cutub oo uu ka kooban yahay xeer hoosaadka cusub ee golaha baarlamaanka, Waxaana dooda la isku raacay in cutub kasta oo si gaar ah cod loogu qaado.
Waxyaabaha ay xildhibaanada sida aadka ah uga hadleen kuna xusan xeer hoosaadka ayaa waxaa ka mid ah gunnada xildhibaanada, shirarka baarlamaanka, hab keydinta xogta, xogheynta baarlamaanka, iyo doodaha baarlamaanka sida loo maareynayo.
Kulanka oo uu shir gudoominayey afhayeenka baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari ayaa waxaa soo xaadiray 188 mudane, waxaana dhammaan ay ogolaadeen in Xeer hoosadku uu dhaqangalo.
Afhayeenka baarlamaanka oo gabagabadii ka hadlay kulanka ayaa sheegay in xeer hoosaadkan uu yahay kii ugu fiicnaa ee baarlamaanku yeesho isagoo xusay in waxyaabaha baarlamaanka shaqadiisa muhimka u ah uu diirada saaray.
Dooda xeer hoosaadka ayaa qaadatay mudo hal bil ah iyadoo guddi gaar ah oo loo saaray habeynta xeer hoosaadkan ay ku sameeyeen wax ka bedel fara badan.
Ugu dambeyntii waxay mudanayaasha qaar soo jeediyeen in baarlamaanka uu markale u yeerio wasiirada arimaha gudaha iyo gaashaandhiga oo ay baarlamaanka ku hor yimaadaan mudo ku siman usbuuc si su’aalo looga weydiiyo arimo muhim ah.